သက်ဝေ: မြို့လေးနဲ့ သူ
Posted by သက်ဝေ at 10:10 AM
Sunny December 29, 2010 at 10:38 AM
အဲဒီမြို့လေးကို တစ်ခါလောက် သွားလည်ကြည့်ချင်တယ်..
ZT December 29, 2010 at 10:39 AM
အတောင်ပေါက်ပြီး မိုးပေါ်ပျံသွားတာ ဖြစ်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဘိုးဘိုးအောင် လာခေါ်သွားတာလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ :D
ဆုမြတ်မိုး December 29, 2010 at 10:43 AM
ငယ်ငယ်တုန်းကဖတ်ဖူးတဲ့ ရေသူမလေးပုံပြင် ၊ အန်ဒါဆင်းပုံပြင်ထဲကို ပြန်ရောက်သွားသလိုခံစားရတယ်...အဲလိုမျိုးလေးတွေကိုသိပ်ချစ်တာ..
I'm gonna go there after collecting the passport cos your post pushed me to do so. Thanks!
Kay December 29, 2010 at 11:29 AM
စာလေးကို ဖတ်ကောင်း ကောင်း နဲ့ ဖတ်နေတာ..ဘာမှန်းမသိ.. အောက်ရောက်မှ ၀ီကီ ကီး ကြည့်တော့မှ..သိတော့တယ်။
တကယ့်..လျှို့ဝှက် စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပဲ..။
မသက်ဝေ ရေးတာလေးက လည်း.. ကောင်း ။
I just copied some comments from your Facebook... Thanks for the post & your friend who got idea for it. Really great post...!!
Daung Dauag : တောင်တွေကိုလည်းချစ်တယ်...တွေ့ထိလို့မရတဲ့ မြူတွေကိုလည်းချစ်တယ်း)
Swe Zin Htun : သွားကို သွားမှ ဖြစ်တော့မယ်။ ပို့စ်က အရမ်း ဆွဲဆောင်လွန်းတယ်။ :))
Vista December 29, 2010 at 11:59 AM
အရမ်းလှတာနော် .. Berjaya Hills ရောပဲ အရမ်းသဘောကျတယ်
My fav place, I am planning to go again there.
ဇွန်မိုးစက် December 29, 2010 at 3:18 PM
We are planning to visit there in coming CNY.
Thanks for the lovely post. Your written is beautiful. :)
ဇွန်မိုးစက် December 29, 2010 at 3:35 PM
I have just read through the wikipedia link as well.
His disappearance is strange and mistery indeed.
အင်ကြင်းသန့် December 29, 2010 at 4:12 PM
ဂျင်းတို့တောင် အဲဒီကိုသွားမလို့စီစဉ်နေကြတာ။း))
rose December 29, 2010 at 7:11 PM
အစ်မသက်ဝေ....စာလာဖတ်ပါတယ်။ အဲဒီလူက အဲ့ဒီ မြို့လေးကနေ ပျောက်သွားတာ ပြန်မတွေ့တော့ဘူးလားပာင်။ စာအရေးအသားလေး ကောင်းတယ်။
ညီမလေး December 29, 2010 at 9:23 PM
ညီမလေးလဲ သူနဲ့အတူ ချစ်စရာမြို့လေးရဲ့ ခေါ်ဆောင်ရာကို စီးမျောပျော်ဝင်သွားတယ် မမသက်ဝေ...ချစ်စရာ အက်ဆေးလေးး စိတ်ကူးယဉ်ချင်စရာ အက်ဆေးလေးးး)
P.S ကောင်းသောနှစ်သစ်ကို တူတူကြိုကြမယ်နော်း)
ကိုအောင်(ပျူနိုင်ငံ) December 29, 2010 at 9:39 PM
အဲဒီမြို့လေးဆီ နှစ်သစ်ကူးချိန်မှာ သွားလည်ချင်
အပြုံးပန်း December 29, 2010 at 11:19 PM
ဒီပိုစ့်ကို ဖတ်ပြီးတော့ ပြုံးမိပါတယ်၊
လိုချင်နေတဲ့အရာကို ရသွားလို့ အားရသွားသလိုမျိုး။
အပြုံးပန်း December 29, 2010 at 11:20 PM
ငွေစန္ဒာ December 29, 2010 at 11:22 PM
မိုးငွေ့...... December 30, 2010 at 1:49 PM
တန်ခူး December 31, 2010 at 6:03 AM
ခုတလော ဒီမြို့လေးရဲ့ကောင်းသတင်းလေးတွေ ကြားရစိတ်နေတုန်း ဒီပို့ စ်လေးဖတ်လိုက်ရတော့ အရောက်သွားချင်တဲ့စိတ်တွေ ထိန်းမရတော့ဘူး ...မြို့လေးရဲ့ဖမ်းစားမှုကြောင့်လား...သက်ဝေအရေးအသားရဲ့ ညို့ငင်မှုကြောင့်လား
PhyoPhyo January 1, 2011 at 6:19 AM
blueskyforest January 2, 2011 at 10:06 PM
သက်ဝေအတွက် အနုပညာပိုမြောက်တဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်စေဗျား။ ကျန်းမာပါစေ။
မြို့လေးကသိပ်ကိုချစ်စရာကောင်းမှာနော်..သွားကြည့်ချင်စရာကောင်းအောင် မမ ကရေးတတ်လွန်းတယ်..
စကားမစပ်..လင့်ခ် ယူခွင့်ပြုပါ မမ..ပြောပြောဆိုဆိုယူသွားပါပြီ..း))
TURN-ON-IDEAS January 5, 2011 at 12:41 PM
စိမ့် စမ်းလေးတွေကော ရှိလား အစ်မသက်ဝေ...
အေးမြလတ်ဆတ်မှုတွေနဲ့မွေ့လျော်စရာ သဘာဝအလှအပနဲ့ အငွေ့အသက်တွေကို ခေတ်မီအဆောက်အဦးတွေဆီက မရနိုင်ဘူး...
“သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အမှတ်တရ”(သက်ဝေ) :)
ကျော်မင်း January 7, 2011 at 8:51 PM
ဒီပို့စ် နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ ပုံလေးတွေ မနေ့ကဘဲ ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ညီမလေးတယောက်တင်ထားတာကြည့်ရတယ်။ စတော်ဗယ်ရီတွေ ကို စနစ်တကျ အိုးတွေနဲ့စင်တွေပေါ်တင်စိုက်ထားတာ။ပန်းစိုက်ခင်း လဘက်စိုက်ခင်း အားလုံးလှမှလှဘဲ။ တကယ်နေချင်စရာမြို့လေးပါ။
johnmoeeain March 19, 2011 at 8:58 PM
တစ်ချိန်ချိန် အလည်မသွားဖြစ်ခင် ဒီအက်ဆေးလေးကို တစ်ခါ ပြန်ဖတ်ဖြစ်အောင် ကြိုးစားမယ်..။ ဒါဆို မြို့ကလေးဆီ သွားတဲ့ခရီးဟာ ပိုကြည်နူးဖို့ ကောင်းလာမယ် ထင်တယ်..။
Amber June 30, 2011 at 9:33 AM
One of my favourite trip is visiting to Cameron Highland. It is peaceful, lovely and attractive place. Very nice post.